Somaliland oo ka qaylo dhaamisay Ayax kaga soo wajahan Yemen.
Wednesday July 10, 2019 - 08:31:21 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Maamulka Somaliland ayaa ka qaylo dhaamiyay Ayax ay sheegeen in uu kaga soo wajahan yahay xeebaha Dalka Yemen.
Muqtaar Cabdiraxmaan Cilmi oo ah Madaxa Xafiiska kahor tagga Ayaxa iyo Cayayaanada xuduudaha isaga gudba ee Wasaaradda Beeraha Maamulka Somaliland ayaa dalbaday in laga gacansiiyo sidii looga hortagi lahaa si uusan ugu faafin deegaanka.
Waxa uu sheegay in mar Ayaxa uu ka weecday Xeebaha Somaliland, balse dabeysha ay dib ugu soo celisay.
Muqtaar ayaa Ayaxa ku tilmaamay musiibo dabiici ah oo u baahan in la isku kaashado si aan u nabaadguurin Beeraha iyo Dhirta.
Qof waliba oo gacan ka geysan karta iyo Hay’adaha Samafalka waxa uu ka dalbaday in ay u istaagaan sidii loo heli lahaa qalabka lagu buufiyo Ayaxa si uusan deegaanka ugu faafin.
Ka maamul ahaan waxa uu tilmaamay in aysan awoodin Diyaaradaha casriga ah ee loo adeegsado buufinta Cayayaanka